Aries Mukadzi uye Virgo ManKuenderana murudo & Kuroora - Zodiac
ndadzima sei iphone yangu
apple 6 plus touch screen isiri kushanda
sei kugadzirisa iphone 5c skrini yakaenda nhema
ipad mweya 2 bhatiri isiri kuchaja
zvekuita kana iphone yako ikati hapana sim kadhi
Mukadzi weAries nemurume weVirgo: kuenderana kwezviratidzo murudo, muwanano
Mhandara murume Aries mukadzi
kuwirirana kwezviratidzo murudo, muwanano
Nekuda kwehunhu hwakasiyana, mukadzi weRam nemurume weVirgo havagone kuuya padhuze pamwechete. Hushamwari hwavo hwakanyanya kugadzikana. Tsvaga kuti ndeapi matambudziko ari kusangana nevaviri ava, uye nekukwezva mukadzi anopisa ane mukomana wepanyika.
Hunhu hwakawanda hwezviratidzo zvezodhiac
Mukadzi akazvarwa pakati paKurume 21 naApril 20 ane magnetism echisikigo uye anogara achifarirwa nebonde rakasimba. Haafanire kuve asina chaanopomerwa akanakisa. Iye anokwezva netsiva yake, pfungwa yekuseka uye sarudzo dzekutaurirana. Asi kunyangwe kubudirira kwevakomana kana vakadzi, vakadzi vakadaro vanowanzo roora mushure memakore makumi matatu.
Musikana ane simba ane hunhu hwakawanda:
Mukadzi anokatyamadza Ram, ane hunhu hunotaura nezve kubatanidzwa kwake mumoto, anongozvifarira iye uye akafuridzira kuzvifarira. Iye anodenha munhu wese anodarika nzira yake.
Virgo Yemunhu inoda kuve nyore uye kujekesa muhukama. Kazhinji haaendi kushamwari kutanga. Kusanzwisisika kwepfungwa kurongeka uye kunyanyisa mwero hazvimutenderi kuzadzisa izvo zvaunoda zvinangwa. Mercury yakamupa mubairo wekudanana nehumwe humwe hunhu.
Pakati pehunhu husina kunaka hwehunhu, vazivi venyeredzi vanosiyanisa pfungwa diki, kushushikana, uye kushushikana. Vanhu vakazvarwa pakati paAugust 24 naGunyana 23 havakwanise kubvuma zvavanokanganisa. Ivo vane udyire uye vanosarudza. Iye murume weVirgo, ane hunhu hwaanoisa pakati pezvinhu zvepasi, anogara achigara uye asingamhanyi kusarudza mukadzi.
Mukadzi weAries uye murume weVirgo: kuenderana
Aries Virgo kuenderana . Vabatsiri vanotarisa zvakasiyana nenyika yakavapoteredza. Ndicho chikonzero nei zvakavaomera kuti vabvumirane sezvinoonekwa sekiyi yehupenyu hunofadza pamwe chete.
Pakutanga kudanana, murume anotya kuvaka hukama hwakasimba naAries. Anosarudza kusarudza mbeva pfumbu dzinowira mumuromo wake.
Aries uye Virgo muhukama hwehukama vachanzwisisa kuti pamwe chete zviri nyore uye zvinonakidza. Mukadzi anopisa anoyemura ruremekedzo rwemurume uye kugona kwake kufunga zvine hungwaru. Achafadzwa nerudzi rwake rwerudo.
Mukadzi anorota achive muhukama uye haana kugadzirira kuchinja, kunyangwe nekuda kwemudiwa. Kana murume achida kuti ivo 'vakotamire' uye vatumire, hukama hwavo hunoguma nekukurumidza uye vasina nguva yekutanga.
Horoscope kuenderana kunosiya pasina mukana wekuvaka mubatanidzwa wakakwana. Kuti uwane kunzwisisana, zviratidzo zvezodhiac zvinofanirwa kutsvaga zvinokanganisa. Asi pamwe chete havazombofi vakafinhwa.
Musikana anopisa anofanira kudzora manzwiro ake, haachagumburwe pazviitiko zvese uye kupindura zvine mutsindo kune zvakataurwa neakasarudzwa. Kana vadyidzani vakawirirana, vanogona kugara vakabatana ruoko kwenguva yakareba. Asi kunyangwe mune ino mamiriro, kukakavadzana kwemumba hakusi kubviswa.
Muchato wevanhu ava unowanzo kuve mhedzisiro yerudo rweAries kana iyo yekutengesa chinangwa cheMhandara. Kana ivo vachisimbisa hukama hwavo pazera diki, hazviite kuti vanga vachigara pamwe kwenguva refu. Vachanyadziswa munguva pfupi. Mumwe murume mushure mebasa anomhanyira kumba kuti azorore uye apore, uye nekusiyana, iye achaedza kusangana neshamwari kana kuenda kuruzhinji zviitiko.
Mukadzi haazoregi mararamiro akadzikama emukadzi wake waakasarudza, anoda kushandisa nguva yakawanda munharaunda. Murume anosarudza kutora chikamu musangano rehupenyu. Kana vaviri vacho vakatanga kuratidza kusagutsikana kwavo, kufonerana, zvichave zvakaoma kudzoka mukuwirirana.
Aries neVirgo muwanano ndiyo nzira ine mutoro zvakanyanya yekurera vana. Ivo vabereki vakanaka kwazvo.
Kunyangwe paine mutsauko muhunhu hwemunhu mumwe nemumwe, mapoka maviri enyeredzi anogona kuvaka hushamwari hwakasimba. Mutungamiri mukutaurirana kwavo achave maAries. Mukadzi uyu anokwanisa kushandisa anonyara mukomana, achitaura nemunhu asingakoke uye anonyara.
Aries haaregi shamwari yako ichinetseka uye inogara ichiwana chirongwa chevaraidzo. Murume anonzwisisa anokwanisa kupa anokwanisa kuongororwa kwezviito zvaRam, rairo mune yakaoma mamiriro. Rutsigiro rwehukama uye nhaurirano dzechokwadi dzinobatsira munhu ane shungu kubata nemanzwiro avo uye kusarudza pasarudzo yaIshe.
Kugarisana kwevakadzi Aries uye Virgo muhukama hwepedyo kuri kure nekukwana. Ichokwadi ndechekuti murume uyu anochengetedza zvakanyanya pamubhedha, uye musikana anozvisarudzira nekusada kudzivirirwa. Murume ane rudo rwekufarira uyo anotarisisa zvakanyanya kudanana.
Kunyangwe zvese izvi zvinopesana, se-xual kudanana kunogona kuunza vanobatana pamwe chete uye kuvaponesa kubva mukuonekana. Mushure mekusawirirana, mitambo yerudo inova nyaradzo chaiyo.
Muchikamu chekutanga chehukama, vadikani vanonakidzwa nekusaenzana kwavo, vanofundirana pamubhedha, vanofambiswa nekufarira kukuru. Mumwe wako anofanirwa kunzwisisa kuti mumwe wake anoshanduka muhukama hwepedyo, uye anofanira kuratidza hunhu hwakawanda.
Kubatana kwevanhu ava hakugone kunzi kwakabatana. MaAries 'anogara achidhonza jira pamusoro pake' uye Virgo haadi kubvuma hudzvanyiriri hwemukadzi uye anoshora marata ake munzira dzose. Vazivi venyeredzi vanotenda kuti murume anotya kutora mutoro kune mumwe wake akasimba. Kuenderana kwepfungwa kwezviratidzo zvezodhiac saka kuri pazasi wepakati.
Kusvikira vese vafananidza mavara, kuyedza kuvaka mhuri yakasimba kuchakundikana. Runyararo mune yavo tandem haina kukodzera kumirira.
Kana iwe ukasaita fungidziro dzisina kunaka idzo dzakakosha kwazvo, saka vadyidzani vane mikana yakanaka yekubudirira mubhizinesi, zvibereko zvekushandira pamwe. Nenzira iyi kuda kwerudo kunogona kukura kuita chishuwo chekuwana mari.
Kana isu tichiongorora hukama hwevanhu vaviri vakasiyana, zvakakodzera kutaurira nezve mabhenefiti avo makuru:
MaAries anodzidza nemhandara, hunyanzvi, kufadza. Murume achakurudzira mukadzi mune zvehupfumi.
Kushushikana kwemukadzi mudiki kunounza chinyorwa chitsva kuhupenyu hweMhandara, kuwana zviitiko zvitsva.
Mukadzi anogona kuendesa mumwe wake munzira kwayo kuti imubatsire kubudirira pabasa rake.
Mumubhedha zvinhu zvese zvakanaka. Vaviri vari vaviri vane hukama munguva dzehukama.
Zvinetso zvehukama zvevaviri zvakabatana nemusiyano muhunhu.
Pakati pezvikanganiso zvakakodzera kutaurwa pane anotevera mamiriro:
Vane mari neimwe nzira. Musikana akagadzirira kushandisa mari dzese pazvipo kushamwari, uye murume anofarira kuchengetedza chese chebhangi nepesenti.
Anoda imba. Anoda kuputika kusingaperi kwemanzwiro.
Chiratidzo chepasi chakatevera hutsanana uye kurongeka. Iye achamupa mhosva yezvinhu zvisina kuchena, chikafu chisina kugadzirwa.
Kana Virgo ichibvumidza maAries akawanda, mukadzi wacho anozoshanduka kuva mudzvanyiriri chaiye.
Iye murume akatsoropodza uye akanyatso chengetedza kusvika padiki diki diki. Kazhinji anowana zvikanganiso nemukadzi wake.
Kazhinji maitiro ekuparadza hukama neVirgo anotanga. Iye mutsika anotambura nenyaya yekuti haakwanise kugadzirisa maAries.
Semurume kukunda mukadzi mhandara
Kune vanhu vazhinji vanoda kuhwina maAries.
Kana Mhandara murume achida kumukunda, anofanira kutevedzera mimwe mitemo:
Musikana mudiki anoda nguva yemaruva esipi. Iye anofarira kufambidzana padenga pasi pemwedzi, serenades uye ushingi zviito.
Zvakakosha kumukoka kune cafe, cinema kana disco. Aries anoda mafaro ekunakidzwa, chero bedzi paine vanhu vakatenderedza.
Kushamisa mukadzi, tenga mavhavha erwendo rwekuenda kune rimwe guta, matikiti egungwa.
Usagara uchitaura nezverudo rwavo. Zvirinani kuzviita kamwe chete, asi nenzira yekutanga.
Iye haashiviriri nhema uye nhema. Iye anonzwisisa anonzwa kusavimbika.
Inodzoserwa nechando uye kusasvikika, kuzviparadzanisa uye makaro.
Kunyanya kutarisirwa kunofanirwa kubhadharwa kwariri uye kumwe kurumbidzwa kunofanira kupihwa.
Kuti usangane nechakanaka cheAries, iwe unowedzera kushamwaridzana. Mukadzi anoda zvinonakidza zvekudyidzana shamwari. Shamwari yake inofanira kunge iri mweya wekambani uye mushanyi. MaAries anosarudza emari anozvimiririra, varume vanoremekedzwa.
Izvo hazvina kuomarara kusvika kumukadzi weRam, asi zvakaoma kudanana naye nekusingaperi. Mukadzi uyu anogona kunge akaremera Virgo. Iyo paseti seti yezvakakosha hunhu kuvimbika, charisma uye mutoro. Ukasangana nematanho aya, une mukana wese wehukama hwerudo nerunako runouraya.
Mukadzi weAries: hunhu, kuenderana ne…